ပရိတ်သတ်တွေ ချစ်ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင်မလေး ဖြူဖြူထွေး ကတော့ ပက်ပက်စက်စက် လှူလိုက် ပြန်ပြီဗျာ – Shwe Likes
ပရိတ်သတ်တွေ ချစ်ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင်မလေး ဖြူဖြူထွေး ကတော့ ပက်ပက်စက်စက် လှူလိုက် ပြန်ပြီဗျာ
Shwe | June 30, 2020 | Celebrity | No Comments
သဘောမနောကောင်း တဲ့စိတ် ဖြူစင်ရိုးသားပွင့်လင်းတဲ့အပြုအမူလေးတွေနဲ့ ပရိတ်သတ် ရင်ထဲထိထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဖြူဖြူထွေးဟာဆိုရင် ယနေ့မှာလည်း ထပ်မံအလှူလုပ်လိုက်ပြန်ပါပြီဗျာ။
ရပ်ရွာဂျောင် ကလောင်က အစ မသိတဲ့သူ မရှိအောင် အောင်မြင်လာတဲ့ သူမ ၊ ဖြူဖြူထွေး လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ သူမရဲ့ပွင့်လင်းရိုးသားတဲ့ အသံ၊ ရုပ်၊ လူကြီးသူမကို ရိုသေနေတဲ့ပုံရိပ်၊ အလှူပြုနေတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို မျက်မှန်းတန်းမြင်ယောင်လာသည် အထိ အလှူအတန်း ရက်ရော လွန်းသူပါ။
လတ်တလော မှာလည်း ဖြူဖြူထွေးဟာ ဗွီဒီယို လောက တိမ်မြုပ် နေချိန် အနုပညာ လောက နဲ့ အလှမ်းဝေးနေတဲ့ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံများကို သူမရဲ့ကြော်ငြာရိုက်ကူးရေးတွေ ထဲမှာ ထည့်သွင်းရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သက်ကြီးဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံများကို ရှိခိုးကန်တော့ပြီး လှူတန်းမှုတွေပြု လုပ်ခဲ့တာကြောင့် အနုပညာသည်အချင်းချင်း တောင် လေးစားရတဲ့ ဂုဏ်ပု ဒ်ကိုလည်း ရယူနိုင်ခဲ့ပါပြီ။
အလှူပက်စက် သလို သူမရဲ့အောင်မြင်မှုကလည်း ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ တဟုန်ထိုး လေရှိန်လိုတိုး တက်လာနေပါပြီ။ ဖြူဖြူထွေးဟာ သူမရဲ့အလှူပြုမှု့တွေကို လူမှု့ကွန်ယက် စာမျက်နှာမှာ အများပြည်သူ သာဓုခေါ်နိုင်အောင် မျှဝေလေ့ရှိသူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာလည်း ပရိတ်သတ်ကြီး သာဓုခေါ်လို့ရအောင် သူမရဲ့အလှူပြုမှု ဗွီဒီယိုဖိုင်လေးကို မျှဝေပေးခဲ့ပြန်ပါပြီနော်။
သူမဟာ ဒီနေ့မှာတော့ SKY ပလပ်စတစ် ပစ္စည်းလေးတွေကို လမ်းမှာတွေ့သမျှ ဘိုးဘိုးဘွားဘွား ကိုကိုမမမောင်လေးညီမလေးတွေ ပေးဝေကာ အလှူဒါနတွေပြုနေတာ ပီတိဖြစ်စရာပါပဲနော်။ လူတိုင်းလည်း သူမကိုအတုယူပြီး ကောင်းမှုဆောင် မကောင်းမှုရှောင်ကြရအောင်နော်။
San Htet Wai
Video from AlinnMyay
အားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေငေးမောကြွေဆင်း သွားစေမယ့် အလှတရားလေးတွေ နဲ့ လှပလွန်းနေ တဲ့ မိုးဟေကို
COVID–19 ကြောင့် ဖခင်ကြီး ကွယ်လွန်သွားတာ ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကို ဖြေရှင်းလာတဲ့ တေးရေး စောခူဆဲ
တိတ်တိတ်လေး နောက်ကျောကို ဓားနဲ့ထိုးပြီး ကြောက်စရာကောင်း တဲ့ အတိုက်အခိုက်တွေ ကြုံခဲ့ရဖူးတဲ့အကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ ချောရတနာ
Shwe Likes Media isathriller about strange things. Knowledge Ancient history; Useful information This page is dedicated to providing content, such as inspirational articles. We are trying to present knowledge to our friends who want to read the knowledge and information easily.
ဘုရားသောက်တော်ရေ ကပ်လှူပူဇော်ရာမှာ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ ပြုလုပ်ပြီး ကပ်ပေမယ့် လွဲမှားနေတဲ့ အလွဲလေးတွေ
ကြာသပတေး သားသမီးများ အတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်(၇)လပိုင်း အတွက် တစ်လစာဟောစာတမ်း
မီးစတဖက် ရေမုတ်တစ်ဖက် ပေါက်ဖော်ကြီးရဲ့ မူဝါဒ နှင့် မြန်မာ ( သို့) ကမ္ဘာက ပြောနေ တဲ့ မြန်မာအကြောင်း
အများသူငါ အိမ်တွင်းအောင်းနေရချိန် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အဆန်းတကျယ် လုပ်ချပြလိုက် ပြန်တဲ့ “လှနုထွန်း”
တရုတ်ပြည်တော်ပြန် တစ်ဦးအား Q CENTER သို့ပို့ဆောင် ရန် စောင့်ဆိုင်းနေစဉ် TAXI ငှားစီး၍ ထွက်ပြေးမှုဖြစ်
တနေ့ကြရင် ရော့ခ်ကာကြီး လုပ်မယ် ဆိုပြီး ခံစားချက်အပြည့် နဲ့ သီချင်းဆိုပြနေတဲ့ ကလေးငယ်လေး(ရုပ်/သံ)
Copyright © 2020 Shwe Likes.